INingizimu Afrika nedemokhrasi: Sinjena njena kwasuka lapha - Bayede News
Njalo ngoMsombuluko ngithola ithuba lokukhuluma ezigidini zabalaleli bomsakazo Ukhozi FM. Lapha ngisuke ngibheka ngelibanzi ipolitiki kanye nepolitiki yomnotho yakuleli nasemhlabeni jikelele. Njengoba sekwaba yizikhathi zobuchwepheshe ngike ngicele kubalaleli ukuba uma sekuphele uhlelo emsakazweni siqhubeke nenkulumompikiswano noma nokufundisana ezinkundleni zokuxhumana.
Inhloso yalokhu wukuqinisekisa ukuthi kulabo abayothatha leli thuba siyokwazi ukufunisana amaqiniso amanye engineqiniso ukuthi kawekho ngisho ezincwadini zomlando, ezikoleni ngisho nakwangqondonkulu. Kulezi zinsuku kukhona okungikhathazayo njalo uma ngifunda ukuphawula kwabantu ngalokho okwenzeka kuleli.
Lapha ngikhathazwa yizinga lokungaqondi kwabantu lokhu okulandelayo: okokuqala, ukusebenza kwepolitiki nepolitiki yomnotho yamazwe, okwesibili, izingqinamba ezibhekene nabaholi bethu, kuthi okwesithathu kube yizinga eliphansi lokuhlaziya izigameko nomlando wepolitiki yakuleli
Ngiyakhathazeka ukuthi ngenxa yezinga eliphansi lokuqonda lokhu kulula nje kubantu ukuba bathi nxa izinto zingahambi kahle bathi kungenxa kaRamaphosa noma kaZuma kokunye uma kubasukile bathi kungenxa kaMbeki. Iphutha lokuqala kulaba wukucabanga ukuthi mhla kuphethe uMbeki, uZuma wayengazi ukuthi kwenzakalani nanokuthi mhla kuphethe uZuma uRamaphosa wabe engazi ukuthi kwenzakalani. Iqiniso lithi uma inkinga idalwe ngoyedwa kulaba baholi laba abanye babe bazi. Bobathathu ngaphambi kokuba babe ngoMengameli bezwe bake baba ngoSekela Mengameli okwabe kubasondeza emandleni nase kuqondeni okwenzakalayo. Angimphathi ngabomu uMandela ngoba kwabanye ‘ungocwebileyo’ akanasono nengineqiniso ukuthi lokho akulona iqiniso eliphelele.
Zolo lokhu uMengameli uRamaphosa ubekhongela elakuleli kubatshalizimali nokuvele ukuthi kukhona abamthembisa khona. Kepha bangaki abazi ukuthi yini eyenza lo mholi ehle enyuka, nokuthi kungani izethembiso lezi abuye nazo zingeke ziqede inkinga yangempela?
Mhlawumbe ngiselapho ake ngivuse amagama kaSolwazi wezomnotho uSampie Terreblanche owathi, ngobuhlakani, echaza ubudlelwano bemali nepolitiki wathi: “Sonke isikhathi inqubo yokunqwabelanisa umnotho idinga igunya lezepolitiki (umbuso) ukwakha uhlaka olusemthethweni nolulawulekayo kanye nokuqinisa izimo ezivumelekile ngaphandle kwakho inqubo yokunqwabelanisa umnotho ibingeke isebenze. Igunya lezepolitiki (umbuso) nalo elingeke likwazi ukusebenza ngaphandle kwezimali nokusekeka kwazo njengoba kuhlinzekwa uhlelo lwezomnotho.” phakathi kwezinhlangothi zepolitiki nezomnotho sekukhona uhlangothi lwezepolitiki luyagxambukela kwelezomnotho, kanjalo nelezomnotho kwelezepolitiki.” Inkinga ebhekene noRamaphosa neNingizimu Afrika ilele kula magama kaSolwazi, ngukugxambukela kwezomnotho kupoliti nokwepolitiki yezomnotho nokulukhuni ukukugwema.
Isiqalo sendaba esixakile
Ebhukwini lakhe elisihloko sithi: The other side of history – An anecdotal reflection on political tranition in South Africa, umufi uFredirik van Zyl Slabbert uxwayisa ngokuthi: “Okukodwa okukhona kuNingizimu Afrika ‘endala nentsha’ intshisekelo yokuphendukezela umlando. Umlando awubukwa ngokuthi kwenzakalani, kodwa ubukwa njengengxenye yokunyakazisa ezepolitiki kugqugquzelwa lokho okuthandwa ngabathile”.
Le nkulumo ifakazelwa ngokuningi esesikubonile futhi sakuzwa lapha eNingizimu Afrika lapho abantu uma bephawula behluleka ukungathathi hlangothi. Yize lokhu kwejwayelekile kubantu abasuke bethanda umholi othize, okuyingozi kuleli yisibindi sabantu abake baphawule ngento abanganalo ulwazi lwayo. Uma nje singenza isibonelo ngodaba lwezikweletu ezikhungethe izwe, ungamangala indlela abanye abantu ngisho kubo abaholi bethu abangenalo ngayo ulwazi lomlando wepolitiki yakuleli ikakhulukazi odabeni lwepolitiki yezomnotho.
Abaqonda umlando wepolitiki yakuleli bayazi ukuthi yihaba ukuthi ubandlululo lwaqedwa yindoda okuthiwa nguDe Klerk njengoba naye ethanda ukuba kwaziwe kanjalo. Abazi umlando bayazi ukuthi ukuzinweba kukaDe Klerk yihaba nje lendoda efisa ukwenza lokhu uVan Zyl Slabbert asixwayisa ngakho. Iqiniso lithi izinguquko kupolitiki yaseWestern Europe, e-United States of America (USA) naseSoviet Union zaba nomthelela omkhulu ekuguquleni umdlalo, okuyipolitiki yombangazwe eNingizimu ne-Afrika. Lezi zinguquko zagqama kakhulu ngonyaka we-1986. Zaba zine izigameko ezenzeka kuloyo nyaka nezaguqula ipolitiki nomnotho wamazwe. Esokuqala saba eSoviet Union ngalo nyaka zingama-26 kuMbasa lapho kwaba nenhlekelele yokuqhuma kwesiphehli senuzi eChernobyl. Le nhlekelele yabankulu kakhulu yahlaza iSoviet Union neyabe ihlonishwa emhlabeni jikelele. Isigameko sesibili ngomhla zili-12 kuNhlangulana uHulumeni wobandlululo washaya umthetho wesimo esibucayi nokwacija imikhonto ezweni.
Kwathi ngoMfumfu kuwo lowo nyaka e-USA uMengameli uRonald Reagan wazithola esehlazweni ngesikhathi iNdlu YeSishayamthetho ivotela ngo‘elethu’ umthetho iComprehensive Anti -Apartheid Act of American Congress. Ngalo mthetho iComprehensive Anti- Apartheid Act we-1986, umkhankaso wamazwe angaphandle wokufaka inqubomgomo yonswinyo, ukuduba nokubhoncula izikhonkwane zomnotho eNingizimu Afrika kwafinyelela ezingeni eliphezulu.
UMhlangano waseReykjavik waqeda konke
Konke lokhu okungenhla kwakha uvuthondaba okwaba wumhlangano phakathi kwenkukhu nempaka okuwuMengameli waseSoviet Union, uMnu uGorbachev nowase-USA uRonald Reagan. Kulo mhlangano kwaba nezivumelwano ezaphoqa ukuthi iSoviet Union yehlise ukuxhasa kwayo ezinye zezinhlangano emazweni angaphandle enye yaleyo nhlangano kwabe kuyi-African National Congress (ANC) neyabe isekhaleni lomzabalazo waboHlanga eNingizimu Afrika. Lesi simo saphoqa ukuba iSoviet Union ifake ingcindezi i-ANC ukuba iye ezingxoxweni. Ngakolunye uhlangothi i-USA ngenxa yomthetho iComprehensive Anti- Apartheid Act yowe-1986, yaphoqeleka ukuba ifake ingcindezi kuHulumeni wobandlululo ukuba ungene ezingxoxweni naboHlanga. Kulokhu uReagan wabe ebambisene noNdunankulu waseBritain uNkk uMargaret Hilda Thatcher.
Sekungumlando ukuthi okwenzeka ngonyaka we-1986 kwaba namphumela muni ngoba kwahlelembela izingxoxo zokubonisana nezagcina ngokhetho lowe- 1994.
Lolu chungechunge luzoqhubeka amasonto amane, lena yingxenye yokuqala.
Bayede News Nov 20, 2019